FBC - Seenaa Koloneel Aliyyii Cirrii‬
FBC Jimaata Waxabajjii 15 2010 E.C. - Friday, June 22 2018 G.C.
Ministirri Muummee Doktar Abiy Ahmad janaraalota sadiif muudama kennan
Walga’iin Dureewwan IGAD Finfinneetti geggeeffamaa jira
Geggeessitoonni olaanoo Godina Walaayittaa hojii gadhiisuuf xalayaa galchan
Walii galteen Aljeers hojiirra oolchuf murteessun callisa biyyoota lamaan gidduu ture cabse-Dr. Dabratsiyoon G/Mikaa’el
Mootummootni Gamtoomanii Hojii Itiyoophiyaa fi Eertiraan hariiroo isaanii cimsuuf jalqabaniif deggarsa barbaachisu kennuuf qophii ta’uusaa ibse
Koloneel Aliyyii Cirriin qabsaa’ota Fincila Baalee keessatti hirmaatan keessaa isa tokko. Gabrummaa ummatarra ga'aa tureen aaruun ijoollummaa isaatti; umriisaa 12ffaan qabsaa’uf bosonaa seene.
Hacaaluu Hundeessaas sirba isaa keessatti; Aliyyii Cirriitu beeka ... karaa dhoombiriin dhukaate.... jechuun Aliyyiin dhukaasa dhoombiriin gita akka hin qabne dhugaa ba’eefira.
Ayyaana Iid Al faxir 1437ffaa, bara 2008 sababeeffachuun OBS Aliyyii Cirrii waliin turmaata taasiseet ture. Koloneel Aliyyiin "Ilmaan teenyayyuu osoo qabsoorra jirruu bosonuma keessatti horre, yeroon nuti loon horsiifannee dikee jalaa harre hin jiru. Humnaa fi yeroo keenya bosona seennee qawwee diinarratti dhukaasaa turre." Jedha seenaa isaa yoo himatu.
Waajjirri Dhimmoota Koomuniikeeshinii aanaa Madda Walaabuu (2008) waa’ee Koloneel Aliyyii raga yoo ba’u, Koloneel Aliyyii Cirrii jeneraala waraanaa diina isaanitiin maalif isaaninakka lolan yoo itti himan; "Nuti kan isiniin lolluuf isin diina keenya waan taataniifi. Yoo isin injifannes yoo duune seenaa arganna. Isin injifannaanis lafa keenya; lafa ummata Oromoo isa bareedaa kana isa uummanni duraanii lafa isaatti boonee loon isaa irratti bobbaafachaa ture, seera isaa irratti tumataa aadaa fi afaan isaa itti guddifataa ture kana arganna" jedhee deebiseef.
Maddi;Kitaaba Shallamaa Kabbee; Seenaa Gootota Oromoo fi Kaan:2009:298, maxxansa 2ffaarraa kan fudhatame.
Seenaa namoota jajjaboo kaanii kitaabicharraa akka dubbistan isin affeerrerra.
Oduuwwan Biroo « Ibsa ejjannoo hirmaattota koonfaransii dhaabbattummaa 7ffaa DhDUO	Koonfaransiin dhaabbattummaa DhDUO xumurame-ibsa guutuu »
Read 19942 times
Oduuwwan Jimaata Waxabajjii 15 2010 E.C.
Oduuwwan Jimaata Waxabajjii 15 2010.
Oduuwwan Roobii Waxabajjii 13 2010 E.C
Oduuwwan Roobii Galgalaa Waxabajjii 13 2010.
Oduuwwan Roobii Waxabajjii 13 2010.
Oduuwwan Kibxaata Waxabajjii 12 2010 E.C.
Oduuwwan Kibxaata Ganaama Waxabajjii 12 2010.